FPlọ CFPx | China CFPx Ndị na-emepụta, ndị na-eweta ngwaahịa
Ezubere ndị transceivers CFP ka e jiri ha rụọ ọrụ na 100 Gigabit Ethernet na ntanetị karịa 10km otu fiber modul, ọ na-ekwenye na nkọwa CFP MSA na IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4. Nyocha dijitalụ dị site na MDIO. CFP LR4 na-akwado ihe RoHS chọrọ.
100Gb / s CFP 850nm 100m DDM VCSEL transceiver optical
Ezubere transceivers CFP ka e jiri ya rụọ ọrụ na 100 Gigabit Ethernet yana 10x11.2Gb / s Multimode OTN. Ha kwenyere na nkọwapụta CFP MSA na IEEE 802.3ba 100GBASE-SR10. Ihe nyocha dijitalụ dị site na MDIO. Onye na-ahụ ihe nyocha anya na-ekwenye na RoHS chọrọ.
Ezubere ndị transceivers CFP2 maka iji ha na 100 Gigabit Ethernet jikọtara 10km karịa otu eriri modul, ma ọ kwenyere na CFP MSA CFP2 HW Specification na IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4. A na-enweta nyocha dijitalụ site na MDIO dị ka akọwapụtara na nkọwapụta interface interface CFP MSA.
100Gb / s CFP2 850nm 100m DDM VCSEL transceiver optical
Ezubere transceivers CFP2 iji mee ihe na njikọ 100 Gigabit Ethernet na 10x11.2Gb / s Multimode OTN. Ha kwenyere na nkọwapụta CFP2 MSA na IEEE 802.3ba 100GBASE-SR10. Ihe nyocha dijitalụ dị site na MDIO. Onye na-ahụ ihe nyocha anya na-ekwenye na RoHS chọrọ.
100Gb / s CFP4 1310nm 10km DDM LAN-WDM EML transceiver optical
Ezubere 100Gb / s CFP4 maka 100GBASE Ethernet. Ha kwekọrọ na CFP MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE802.3bm CAUI-4 na CEI-28G-VSR. Ndị transceivers optical na-agbaso ihe RoHS chọrọ.
100Gb / s CFP4 850nm 100m DDM VCSEL transceiver optical
Ezubere 100Gb / s CFP4 maka 100GBASE-SR4 Ethernet. Ha kwekọrọ na CFP4 MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-SR4 na CAUI-4, na OIF CEI-28G-VSR .. Ndị na-ahụ maka ngwa anya na-agbaso ihe RoHS chọrọ.